Vehivavy Zanatany Hitantana An’i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2016 12:38 GMT
Zanatany avy any Chiapas. Sary an'ilay mpampiasa Flickr Andrés Virviescas. Nampiasaina teo ambany fahazoana alàlana CC BY-NC-ND 2.0
Roa taona latsaka manomboka izao, rehefa hifidy ny filohany vaovao ireo Meksikana, dia mety hahita anaranà vehivavy zanatany ao anatin'ny lisitry ny hofidiana.
Nandritra ny Kaongresy Nasionalin'ny Zanatany andiany fahadimy (CNI), nanambara ny fikasan'izy ireo hanendry vehivavy zanatany harotsaka ho mpifaninana mahaleontena ireo vondrom-piarahamonina zanatany Meksikana sy ny Tafika Zapatista ho an'ny Fanafahana ny Firenena (EZLN), mandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2018. Nipoitra tanatinà taratasy mitondra ny lohateny hoe “Hihovitra hatrany ifotony anie ny tany” io fanambarana io:
Araka ny voalaza etsy ambony, manambara ny tenanay ho anatinà fihaonana maharitra izahay ary handinika ilay fanekena ny CNI Fahadimy anatin'ny haitoetaninay (géographie) isany avy, ireo faritany, ary ireo làlana mba hametrahana filan-kevitra zanatany ho an'ny governemanta izay vehivavy zanatany no hitondra teny amin'izany, solontenan'ny CNI amin'ny maha-mpirotsaka hofidiana mahaleontena azy, miady ho an'ny Kaongresy Nasionalin'ny Zanatany sy ny Tafika Zapatista ho an'ny Fanafahana ny Firenena anatin'ity fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2018.
Amin'izao fotoana izao, mbola tsy nanonona ny anaran'ilay vehivavy voatendry hirotsaka hofidiana izy ireo.
Zava-dehibe ny mitadidy fa ny EZLN dia vondrona mitam-piadiana saika itambaran'olona zanatany avy ao amin'ny hery farany havia, izay nikarakara fikomiana tany Chiapas, any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Meksika, tamin'ny 1994. Tanatin'ireo taona faramparany, tsy nanao hetsika mihitsy izy ireo ary nanova anarana ny mpitarika azy fanta-daza indrindra, ilay Kômandà lefitra Marcos, tamin'ny 2014, mba hanangana endrika iray vaovao antsoina hoe Komandà lefitra Galeano (milaza ireo tantara hafa fa Rafael Sebastián Guillén Vicente no tena anarany).
Noresahina tanatin'ny media tranainy sy ny media sosialy ireo vaovao ireo, indrindra taorian'ny fanehoan-kevitra avy amin'i Andrés López, mpanangana sady mpitarika ny antoko pôlitika antsoina hoe Hetsika Fanavaozana Nasionaly (MORENA). Nilaza izy fa hanamarika fiovana lehibe eo anivon'ny vondrona ny fandraisan'ny EZLN anjara anatin'ny fifidianana:
“Atodim-bibilava” ny EZLN tamin'ny 2006. Tamin'izany, amin'ny maha-radikaly hiringiriny azy dia niantso ny tsy hifidianana izy ireo ary ankehitriny anefa dia manendry mpifaninana mahaleontena.
Naneho ny heviny ny mpanao gazety Pascal Beltrán del Río manoloana izany tao anatin'ny tsanganany antsoina hoe “El Voto Indígena” (Ilay Vato Zanatany):
Manamarika fiovana lehibe teo amin'ny toerany taloha eo amin'ny lafiny fifidianana ny fanapahankevitra farany nataon'ny EZLN sy ny Kaongresy Nasionalin'ny Zanatany, satria hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1994, 2000, 2006, ary 2012 dia niantso ny tsy hifidianana izy ireo, ka nandà ny kilasy pôlitika manontolo.
Nitarika fiampangàna avy amin'i Andrés Manuel López Obrador, mpitarika ny MORENA sady mpifaninana virtoaly ho an'ny Los Pinos [fonenana ofisialy ho an'ny filoham-pirenen'i Meksika] amin'ny 2018, izany fiovàna izany. Izy izay imbetsaka no nanasa ny EZLN hiditra ao anatin'ny hetsika ataony ho an'ny “tena fiovàna”. Saingy, hatraiza ny fiantraikan'ny firotsahanà vehivavy zanatany ho mpifaninana amin'ny 2018 eo amin'i López Obrador?
Ao amin'ny Twitter, nanakiana an'i López ireo mpampiasa toa an'i Rodrigo Castro:
Mazava be fa ny antony hanendren'ny EZLN zanatany ho mpifaninana amin'ny 2018 dia ny handratra ny AMLO. Aoka izay fa mangina.
Ao amin'ny takelaka Twitter misy ny mombamomba ny mpanao sariitatra Rafael Barajas, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe “Fisgón”, dia nasehony an-tsary ny toerana vaovao misy ny EZLN, miresaka mikasika ny fandavany taloha sy ny fialan'ilay vondrona mitam-piadiana tanatin'ny zotra manontolon'ny fifidianana ao amin'ny firenena:
Sariitatra: Tadidinareo avokoa ve ny zavatra nolazainay momba ilay fakon-javatra dia tsy inona fa ny sangy ratsy teo amin'ny fifidianana tao Meksika? Ankehitriny dia hiditra izany isika!
Tweet: Hanao firotsahana hofidiana mahaleontena ny EZLN. Tsy tokony hanazava ity fiovàna lahateny sy paikady ity ve izy ireo hanazavany ny toerany tamin'ny 2006?
Mandritra izay fotoana izay, noraisin'i Dalia Vázquez tahaka ity manaraka ity ireo vaovao:
Tena hifidy ilay zanatany mpifaninana avy amin'ny EZLN aho, aza miteny betsaka!
Ny andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny governemanta
Mifangarika amin'ny zavatra niainan'ny vehivavy anatin'ny pôlitika nandritra ny volana maro farany ny mety hanendren'ny EZLN vehivavy zanatany hifaninana ho filoham-pirenena, indrindra ireo izay noterena hampandefitra ny toerana azony ara-dalàna tamin'ny alàlan'ny fifidianana.
Toy izany ny mahazo an'i Rosa Pérez, izay noteren'ny vahoakan'i Chenalhó ao Chiapas – indrindra ny fanjakana izay hananan'ny EZLN anjara toerana betsaka – hiala teo amin'ny toerany, noho ny antony dia tsy inona akory fa ny mahavehivavy azy. Efa nandidy ny famerenana an'i Pérez ny fahefana misahana ny rariny eo amin'ny fifidianana, saingy mbola tsy tanteraka izany. Vao haingana izay dia tojo trangan-javatra sahala amin'izany ihany koa i María Gloria Sánchez, ben'ny tanànan'i Oxchuc ao amin'io fanjakana io ihany.
Noho ity fitondran-tena manavaka fananahana ity, izay leferina satria tafiditra anatin'ny “fomba amam-panao” an'ny zanatany, dia mahaliana ny fahafantarana raha tena manondro mpifaninana tokoa ny vondrona mitam-piadiana voakasik'izany, raha hahazo ny tohana ilainy izy mba hahazoany antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra ara-dalàna ny firotsahany ary raha tena manana ny fahafahana hifaninana izy, tsy amin'i López irery ihany – izay nikatsaka ny toeran'ny filoham-pirenena efa in-droa izay – fa amin'ireo olona marobe ao anatin'ny kilasy pôlitika izay efa naneho ny hetahetany ho an'ny 2018.
Vehivavy Otomi. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr, Citlali Medal, nampiasaina teo ambanin'ireo fepetran'ny fahazoana alàlana Creative Commons.